Muriel Harris Yakanakisa Service Mubairo - Wepasi Pose Kunyorera Nzvimbo Association
Inotumidzwa mushure mekugamuchira kwayo kwekutanga uye kupihwa kumamwe musangano weInternational Writing Centers Association (IWCA), iyo Muriel Harris Yakanakisa Service Mubairo inoona sevhisi yakasarudzika iyo yakabatsira nharaunda yepasi rose yekunyora munzvimbo dzakakosha uye dzakapamhama nzira.
Kusarudzwa kunofanirwa kutumirwa segwaro rimwe chete rePDF rine mapeji akaverengwa, uye rinofanira kusanganisira zvinhu zvinotevera:
Tsamba yekusarudzwa iyo inosanganisira zita uye chinzvimbo chemunhu akasarudzwa, ruzivo rwako pachako kana ruzivo nezvakapihwa basa remunyori kunzvimbo yekunyorera nzvimbo, uye zita rako, kubatana kwesangano uye kero yeemail.
Yakadzama magwaro ekutsigira (anokwana mapeji mashanu) Izvi zvinogona kusanganisira zvakatorwa kubva ku curriculum vitae, musangano kana zvakaburitswa, nyaya kana anecdotes, kana basa rekutanga neakasarudzwa.
Dzimwe tsamba dzekutsigira (sarudzo asi inogumira ku2)
Mazita ese anofanirwa kuendeswa nemagetsi pafomu iri: https://forms.gle/GwBQazbh3q9sPh2w6. Mibvunzo inofanira kunanga kuna Jon Olson (jeo3@psu.eduClint Gardner (Clint.Gardner@slcc.edu), uye Leigh Ryan (LR@umd.edu) nemutsara wenyaya weemail uyo unosanganisira mutsara unoti "MHOSA Nomination Question."
Zvese zvinhu zvinofanirwa kuendeswa pamberi paJune 30, 2022.
Verenga nezve nhoroondo yeMHOSA mu Kunyora Lab Tsamba 34.7, mapeji 6-7 .
2016: Paula Gillespie uye Brad Hughes
1997: Byron Gara